Ny Apple Watch dia afaka mandrefy ny siramamy sy ny alikaola amin'ny ra sy ny tsindry arterial | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch dia afaka mandrefy siramamy amin'ny rà sy alikaola ary tosidra
Toni Cortés | 03/05/2021 20:00 | Nohavaozina amin'ny 03/05/2021 20:04 | Apple Watch
Diabetika aho, ary na dia nitady ny tsena aza aho dia tsy misy fitaovana mahavita mandrefy ny haavon'ny glucose ao anaty ra raha tsy mifandray amin'ny hoditra na mivantana amin'ny ra. Izany no tsy misy fanjaitra, tsy misy mihitsy.
Ka gaga be aho tamin'ilay vaovao rehefa nipoitra ny mety fotoana vitsy lasa izay fa afaka mandrefy ny Apple Watch ho avy haavon'ny siramamy amin'ny ra. Nanao fikarohana tamin'ny tranokala fitsaboana aho, ary toa azo atao izany. Betsaka ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny fandalinana ra fotometrika, ary toa efa azo atao amin'ny fomba tsotra ny fiasa toy izany sensor optika. Vaovao mahafinaritra, tsy isalasalana.
Toa ny isan'ny asa ataon'ny tarika reactive mifehy ny haavon'ny glucose ao anaty ra dia efa niisa andro. Amin'izao fotoana izao, ny diabeta manerantany dia tsy manan-tsafidy afa-tsy manindroha anay amin'ny rantsantanana iray ary mandena reagent misy ra hamaritana ny haavon'ny siramamy, na mampiasa sensor izay voatsindrona amin'ny hoditra. Saingy toa hiova ny raharaha.
Ny fanadihadiana fotometrika ra Mihamitombo hatrany izy ireo, ary toa amin'ny alàlan'ny famakafakana ny taratry ny tara-pahazavana ao amin'ny ra sasany, dia azo ampifandraisina amin'ny haavon'ny gliokaozy ao anatiny, miaraka amin'ireo angona biometrika vaovao.
1 Veloma amin'ny fanjaitra
2 Azo ampidirina ao anaty smartwatch na bracelet izy io
3 Hisy maodely roa ho an'ny sensor
Veloma amin'ny fanjaitra
Ny glucose ankehitriny dia mitaky rà latsaka, fa mety hiova izany atsy ho atsy.
Ity haitao ity dia efa tena mandroso ary efa hamidy. Midika izany fa toy ny mpanara-maso ny fo rehetra izay amidy eny an-tsena, tsy ho ela, ihany «mandrehitra»Ny rantsan-tànana misy fatra maivana tena manokana, ankoatr'ireo ankehitriny izay efa mampiseho aminao ny fihenan'ny fo sy ny haavon'ny oksizena amin'ny rà, dia hasehony anao koa ny haavon'ny biometrika hafa toy ny tosidra, ny haavon'ny siramamy ary ny haavon'ny alikaola ao anaty ra.
Ka, rehefa mahalala an'ity mialoha ity, dia tsy mitombina ny mieritreritra fa ny sensor optika dia azo ampidirina amin'ny ho avy amin'ny Apple WatchToy izany koa fa efa manana iray ao ambadiky ny famantaranandro izay mandrefy ny fihomboantsika isika, ny haavon'ny oksizena ao anaty ra, ary manampy ny ECG.
Azo ampidirina ao anaty smartwatch na bracelet izy io
Ny Apple Watch dia efa manana sensor optika mandrefy ny pulsa sy ny haavon'ny oxygen ao anaty ra.
Rockley photonics dia iray amin'ireo orinasa vitsivitsy manerantany izay nampifantoka ny fikarohana tamin'ny famolavolana sensor optika izay mampiasa ny haitao hazavaina etsy ambony. Ary Apple no ao ambadik'io.
Apple dia mpanjifa lehibe indrindra an'ny Rockley Photonics, miaraka amin'ny Samsung, Zepp Health, LifeSignals Group ary Withings. Tena matotra ilay tetikasa.
Ireo sensor Apple Watch efa misy dia mampiasa fangaro hazavana infrared ary hita maso mba handrefesana ny tahan'ny fo sy ny saturation oxygen. Rockley dia miasa amin'ny kinova mora tohina kokoa amin'ireo sensor ireo, izay afaka mandrefy ny haavon'ny siramamyny toaka, ary ny drà. Sangisangy kely.
Mba hanaovana izany, Rockley Photonics dia nihena a spectrometer birao amin'ny haben'ny puce iray. Ny kinova kely dia kely indrindra dia mampihena ny zava-bita sy ny haben'ny fanokafana izay manangona hazavana. Saingy Rockley dia nahavita nanatsara be ny tahan'ny signal-to-noise raha oharina amin'ny masinina feno habe. Izany dia ahafahana mampiasa ny angona mba hahazoana marika marobe biofizika sy biokimia.
Hisy maodely roa ho an'ny sensor
Mandroso izy izao maodely roa an'ny sensor optika. Fototra iray izay afaka handrefy ny tahan'ny fo, ny saturation oksizenina, ny tosidra, ny hydration ary ny hafanan'ny vatana.
Ny maodely "mandroso" dia afaka mandrefy glucose amin'ny rà, karbonina oksida, lactate ary haavon'ny alikaola. saika tsy misy. Nanome toky ny orinasa fa ny taranaka voalohany amin'ireto sensor vaovao "mifamatotra" amin'ny smartwatch ireto dia havoaka ao amin'ny tapany voalohany tamin'ny 2022.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch dia afaka mandrefy siramamy amin'ny rà sy alikaola ary tosidra